Đánh giá top 12 máy nghe nhạc MP3, MP4 tốt nhất nên mua 2022 | Muasalebang - Muasalebang
Đánh giá top 12 máy nghe nhạc MP3, MP4 tốt nhất nên mua 2022 | Muasalebang
Đang Đọc: Đánh giá top 12 máy nghe nhạc MP3, MP4 tốt nhất nên mua 2022 | Muasalebang in Muasalebang
Ukulalela umculo nsuku zonke kuwumsebenzi wakho wokuzilibazisa, kodwa wesaba ukuthi lezo zingoma “zizodla” ibhethri yefoni yakho emahoreni angu-1-2 nje wokulalela umculo oqhubekayo. Ungakhathazeki, umdlali mp3, mp4, mini wazalelwa ukusindisa izinkathazo zakho.
Idivayisi inosayizi ohlangene, umklamo wesimanje ozokusiza ukuthi ucwilise emhlabeni wakho womculo amahora amaningi ngaphandle kokukhathazeka ngokukhipha ibhethri. Joyina i-Chanhtuoi.com ukuze uqambe imikhiqizo engu-12 ehamba phambili emakethe namuhla ukuze uthole ireferensi yakho.
1 Ingabe kufanele ngisebenzise isidlali se-mp3?
2 Imibandela yokukhetha isidlali somculo esishibhile esingcono kakhulu
2.1 Ikhono lokusekela amafomethi wefayela
2.2 Ukugcinwa kwememori
2.3 Umthamo webhethri
2.4 Usayizi wesikrini
2.5 Izesekeli ezinikeziwe
3 Abadlali abangu-12 abahamba phambili bomculo abashibhile
3.1 1. I-Ruizu X02 MP3 Player 8GB
3.2 2. I-Ruizu D15 Bluetooth Music Player 8GB Inkumbulo Yangaphakathi
3.3 3. Engalahleki MP3 MP4 Bluetooth H1
3.4 4. I-Sony Walkman NWZ-B183F
3.5 5. I-Hi-res Sony Walkman NW-A55
3.6 6. Isidlali se-Ipod MP4
3.7 7. Isidlali esincane seMP3
3.8 8. Benjie K11 .MP3 player
3.9 9. I-ZOZO Z8 4GB MP3 Player
3.10 10. Isidlali se-Xiaomi Shanling M0 MP3
3.11 11. FiiO M3K .MP3 Player
3.12 12. Aigo MP3-206
Ingabe kufanele ngisebenzise isidlali se-mp3?
Impendulo ithi Kuya ngokuthandwa nguwe, izidingo kanye nezimali ngoba abadlali beMP3 abashibhile nhlobo. Kodwa izinzuzo ezinkulu ezilethwayo azinakuphikiswa:
Idivayisi isekela amafayela amaningi ahlukene: MP3, MP4, WMA, … izingcingo ezijwayelekile ezingenawo. Lokhu kukusiza ukuthi ulalele zonke izinhlobo zezingoma.
Ikhwalithi yomsindo wedivayisi ingcono kakhulu kuneyamafoni ajwayelekile: ububanzi bomsindo obanzi, isiteji somsindo ozwakalayo, umsindo ocacile, ukugqamisa ingoma ngayinye, ecacile kakhulu futhi ethophayo.
Inani lenkumbulo libi: eliphansi kakhulu . Lokhu kukusiza ukuthi ugcine amakhulu noma izinkulungwane zezingoma ngaphandle kokukhathazeka ngokulayisha kakhulu.
Lolu cingo luba usizo nakakhulu uma ujwayele ukujwayela imidlalo yangaphandle: ukugijima, ijimu,… Ngenxa yobukhulu balo obuhlangene kakhulu kunamafoni, imigqa eminingi ifakwe iziqeshana zokunamathisela emabhulukweni nasemahembe, ukuvimbela ukuphuka ngesikhathi sokuzivocavoca ngamandla. .
Imibandela yokukhetha isidlali somculo esishibhile esingcono kakhulu
Ikhono lokusekela amafomethi wefayela
Iningi lethu lilalela umculo usesimweni samafayela eMP3, asekelwa yiwo wonke amadivaysi asetshenziswa ukulalela umculo namuhla. Kodwa uma ufuna ukulalela umculo onekhwalithi ephezulu, kungcono ukuthola ukuthi hlobo luni lomshini olusekela amafayela e-FLAC. Akhona namanye amafomethi wefayela anjengalawa: MP4, WAV, KMV, AIFF,…Futhi kunjalo, amafomethi efayela amaningi asekelwayo, i-padding izobiza kakhulu.
Bheja uhlu lwakho lwadlalwayo alukho ngaphansi kwezingoma eziyi-100. Ngakho-ke, umthamo omncane wedivayisi kufanele futhi ube ngu-64GB. Uma uhlu lwakho lokudlalwayo lungaphezu kwalokho, cabangela amandla angu-128GB, 256GB, kanye no-512GB ukuze uhlangabezane nezidingo zakho zokulondoloza umculo.
Uma uzonda ukuphazamiseka phakathi nokulalela ingoma oyikhonzile, kufanele ukhethe idivayisi enamandla ebhethri okungenani amahora angu-4-5.
Ububanzi besikrini obufanele be-mp4, isidlali se-mp3 busuka ku-3 kuya ku-5 amayintshi. Kulo sayizi, uzobona ngokucacile ulwazi esikrinini: isihloko sengoma, igama lomculi, nezinkinobho zomsebenzi.
Abadlali be-Mp3 bavamise ukuba nezinto eziningi ezinamathiselwe ezifana: Ikhebula lokushaja le-USB, ikesi, ihedisethi, imanuwali yomsebenzisi… Odinga ukukwenza ukuhlola kabili ukuthi lezo zinsiza zingaxhumeka kudivayisi. , ikesi lifana nedivayisi njengokudideka kungenzeka.
Imishini itholakala ngamanani ahlukene. Ukusuka ku-50,000 VND kuya ku-20,000,000 VND ayatholakala. Ezishibhile zivame ukuba nezinkinobho zokulawula ngomshini ezinemisebenzi embalwa elula kodwa zisahlangabezana ngokugcwele nezidingo zokugcina nokudlala umculo. Uhlobo olusezingeni eliphezulu, ngaphezu kokuphelela kobuhle, izinsiza eziningi nazo zihlanganiswe ukuze zanelise izidingo eziphezulu zabasebenzisi.
Abadlali abangu-12 abahamba phambili bomculo abashibhile
1. I-Ruizu X02 MP3 Player 8GB
Isidlali se-Ruizu X02 8GB MP3 sinomklamo olula kodwa oyinkimbinkimbi. Umbala wezibani unobukhazikhazi, ingilazi yesibuko imelana nomthelela. Lesi sidlali se-mp3 sisekela amafayela alalelwayo afinyelela kwangu-4: i-WMA, MP3, APE, WAV ikuvumela ukuthi ujabulele zonke izinhlobo zezingoma.
Lesi sidlali se-MP3 sinemisebenzi eminingi: ukufunda izincwadi, ukulalela umculo, amavidiyo, ukubuka izithombe,… Ikakhulukazi, futhi sisekela amafayela e-ebook ukukusiza ukuthi uhlale endaweni ethule ukuze ucije ikhono lakho lolimi. Umthamo wekhadi lememori engu-64GB osetshenziswe amahora angu-80 nawo uyiphuzu lokuhlanganisa lomkhiqizo.
Isekela amafomethi amaningi wefayela
Isikrini esinobungane, kulula ukusisebenza
Umsindo omkhulu, ocacile
Akukho ukuklabalasa, ukudlikiza, ukunensa lapho ulalele
Umthamo omkhulu, ibhethri elikhulu, ukusetshenziswa isikhathi eside
Ububi: Ayifanele ukubuka izithombe
2. I-Ruizu D15 Bluetooth Music Player 8GB Inkumbulo Yangaphakathi
Okugqamile kwe-Ruizu D15 ukusetshenziswa kwe-chip ye-DAC ekhipha amakhodi ukuze kuthuthukiswe ikhwalithi yokudluliswa komsindo weqiniso nosezingeni eliphezulu. Ukwengeza, ubuchwepheshe bokuvikela ibhethri obuzenzakalelayo nokuvalwa kwesikhathi kusiza ukulondoloza umthamo webhethri, ngaleyo ndlela kwelule impilo yomkhiqizo.
Lo mshini futhi uvumela abasebenzisi ukuthi barekhode ngekhwalithi ye-HD, ewusizo kakhulu ekuzilolongeni ukulalela ulimi lwangaphandle. Futhi isekela cishe noma yiluphi uhlobo lwefayela: FLAC, AVI, APE, MP3, WMA, WAV, AMV ukukusiza ujabulele zonke izinhlobo zomsindo ngokucace kakhulu. Umthamo wekhadi lememori engu-128GB nawo uyinzuzo yomkhiqizo.
Nenhle kakhulu futhi design nemfashini
Isikrini sokuthinta esikhulu
Ikhwalithi yomsindo enhle, ethembekile, ebushelelezi
Isekela zonke izinhlobo zamafayela
Iyakwazi ukuxhuma umculo kusuka ku-smartphone kuya kusidlali somculo
Umthamo omkhulu, ibhethri elihlala isikhathi eside: 500mAh
Izinsiza eziningi ezihlukahlukene
Ububi: Azikho izibuyekezo okwamanje
3. Engalahleki MP3 MP4 Bluetooth H1
I-Lossless MP3 MP4 Bluetooth ingeyesigaba sangempela. Isikrini se-IPS HD esingu-4 intshi sizwela ngokuphelele ukuthintwa, sikhiqiza ikhwalithi yesithombe ebukhali kakhulu nengokoqobo. Lesi sidlali seMP3 sisekela izinhlobo zamafayela: APE, WMA, MP3, ACC, OGG, FLAC, DRM, WAV.
Ikakhulukazi, isikrini sokubonisa esinokulungiswa kwe-1920x1080px sibukhali ngokwedlulele futhi sicacile. Umkhiqizo uphinde ube nethuba lokukopisha izingoma kusuka ocingweni lwakho ukuya ku-OTG. Ukurekhoda okwakhelwe ngaphakathi, iwashi, nezici zegeyimu zisiza ukwenza impilo yakho ibe yesimanje.
Isekela wonke amafayela
Isibonisi esicijile ngokwedlulele
Umthamo omkhulu, ibhethri elihlala isikhathi eside
Ububi: Ivolumu ephansi
4. I-Sony Walkman NWZ-B183F
I-Sony Walkman NWZ-B183F inosayizi omncane kakhulu, isisindo esilula kakhulu, esilungele ukugcinwa emabhulukweni, amahembe, izikhwama uma usohambeni. Yenziwe ngengxube ye-aluminium ecwebezela kakhulu ukuze imelane nomthelela omuhle, yandise impilo yomkhiqizo.
Idivayisi iphethe imibala engafika kwemi-5: ebomvu, emhlophe, ephuzi, eluhlaza okwesibhakabhaka, emnyama ukuze abasebenzisi bakhethe kuyo. Inkinobho yokulawula kulula ukuyicindezela, kulula ukuyisebenzisa nezinkinobho ezi-2 Emuva/Ekhaya, Dlala/Misa Isikhashana, Setha Kabusha. Umkhiqizo usekela Linear PCM, WMA, MP3, AAC-LC amafomethi wefayela. Okugqamile okuphawulekayo kwalo mshini isikhathi sokushaja ngokushesha samaminithi angu-3, ​​angasetshenziswa imizuzu engu-90 ngokuqhubekayo.
Usayizi ohlangene kakhulu, oguquguqukayo
Isivinini sokushaja esisheshayo
Ikhwalithi yomsindo ehlanzekile necacile
Ibhesi enamandla, ukulalela okuhle
Ibhethri eliqine ngokwedlulele
Asikho isikrini sokubonisa
Isikhala esincane: 4GB .hard drive
5. I-Hi-res Sony Walkman NW-A55
Ulayini wabadlali bomculo unenani eliphakeme kancane, kodwa ikhwalithi eyilethayo ayinakuphikwa. Ifakwe nobuchwepheshe be-S-Master HX ukuze kuthuthukiswe ukusebenza, kuncishiswe ukuhlanekezela. Isikrini esingu-3.1″ esiphendula kahle kakhulu esinazo zonke izinkinobho ezisetshenziswa ngokuthinta. Ikakhulukazi, idivayisi iphinde isekele i-NFC elula, i-LDAC ne-Bluetooth uxhumano.
Uyathanda ukulalela ukusakaza bukhoma? Uma kunjalo, lokhu kuyisinqumo esiphelele kuwe. Iphuzu elinconywa kakhulu kubasebenzisi ubukhulu benkumbulo yangaphakathi: 16GB, amahora angu-45 wokudlala umculo, okunikeza abasebenzisi izikhathi ezinhle kakhulu zokujabulela umculo.
Idizayini enhle, edonsa amehlo
Izinga eliphezulu lomsindo
Isikrini esibanzi, isilawuli sokuthinta
Umthamo omkhulu ngokwedlulele
Impilo yebhethri ende kakhulu
Ubuchwepheshe obuningi besimanje busekela
Ubuchwepheshe obuphezulu bokukhansela umsindo
Cons: izindleko eziphezulu
6. Isidlali se-Ipod MP4
Isidlali se-Ipod MP4 sinikeza izinketho ezihlukahlukene kubasebenzisi abanamathoni acebile ahlukahlukene: ophuzi, ompunga, omnyama, oluhlaza okwesibhakabhaka, obomvu. Umkhiqizo wenziwe ngepulasitiki eqinile enokuqina okuphezulu, ehambisana namadivayisi amaningi.
Umshini ufakwe isistimu yezinkinobho zemishini eqinile, ebucayi, futhi kulula ukuyisebenzisa. Isibonisi sicacile futhi singokoqobo. Lena ihedisethi enemisebenzi eminingi engabuka amamuvi, ifunde ama-ebook, ilalele umsakazo we-FM, ilalele umculo, irekhode umsindo,…
Umsindo ocacile, ocacile
Umklamo ohlangene, ulingana esandleni
Cons: Qeda ayikho phezulu
7. Isidlali esincane seMP3
Njengoba igama liphakamisa, usayizi walo mshini mncane kakhulu, ulingana nentende yesandla sakho, kulula kakhulu ukuwuthwala. Umkhiqizo unemibala eminingi ehlukene njenge: blue, pink, orange, black, grey ukwanelisa izintandokazi zomuntu ngamunye.
Isidlali seMP3 senza kahle umsebenzi wesidlali somculo esijwayelekile: ukubukela amafilimu, ukulalela umculo, ukulalela umsakazo, ukufunda ama-ebooks,… Le modeli isekela amafomethi amaningi athandwayo efayela emakethe. Awudingi ukukhathazeka ngokusebenza kahle yomkhiqizo.
Idizayini encane, eyisikwele
Yenyusa ivolumu iye phezulu, iphukile
8. Benjie K11 .MP3 player
Isidlali se-Benjie K11 MP3 sinomklamo olula, oyinkimbinkimbi kungemuva elihle le-jet-black. Umkhiqizo usekela imemori khadi ngomthamo we-64GB ukuze uhlangabezane nezidingo eziyisisekelo zabasebenzisi zokulalela umculo, ukubukela amamuvi, ukufunda izindaba.
Amandla alesi Player MP3 ukuthi isekela amafomethi amaningi: OGG, WAV, MP3, DRM, ACELP, AAC, WMA, FLAC,… Ifakwe imbobo yokushaja ye-USB encane, izokusiza ukuthi usebenzise kalula.
Umklamo omuhle, isisindo esincane, kulula ukuwuthwala
Ukusekelwa kwamafomethi amaningi
Ukwanelisa izidingo eziyisisekelo kahle
Ububi: Amandla ebhethri aphansi
9. I-ZOZO Z8 4GB MP3 Player
Isidlali se-ZOZO Z8 4GB MP3 siletha ukusebenziseka kalula kubasebenzisi ngenxa yobukhulu baso obuminyene kakhulu, ukuguquguquka okuphezulu, ukuphatheka kalula noma kuphi. Idivayisi yenza kahle ekudlaleni umculo kumafomethi amaningi omculo: MP3, WAV.
Isidlali seMP3 siphinde sihlanganise imbobo yokuxhumana ye-USB, izengezo eziningi ezihlaba umxhwele: izingoma eziluphu, ukurekhoda izingoma ezisanda kuzwakala. Idivayisi inempilo yebhethri enhle enesikhathi esiphelele sokusebenza esingafika emahoreni angu-9.
Umthamo webhethri omkhulu
Ububi: Isibonisi esincane
10. Isidlali se-Xiaomi Shanling M0 MP3
Isidlali se-Xiaomi Shanling M0 MP3 sinosayizi ohlangene kodwa sinomklamo owubukhazikhazi futhi osemfashinini kungemuva elimnyama lekilasi. Isikrini sokuthinta esizwela ngokwedlulele esenziwe ngengilazi eqinile enokumelana okuhle. Sibonga kakhulu nge-multi-function rotary knob, ukusebenza kwe-alamu okuzenzakalelayo, ukunqanyulwa kwebhethri okuzenzakalelayo uma kugcwele.
Okwenza idivayisi idume amahora angu-15 okusebenza okuqhubekayo nomthamo omkhulu wememori khadi: 256GB ikuvumela ukuba ujabulele ngokugcwele izingoma zakho ezihamba phambili nakuba zinzima.
I-Classy, ​​idizayini enhle
Isikrini esithintwayo siyasabela, akukho ukubambezeleka
Umthamo omkhulu wememori khadi
Ububi: inani eliphezulu impela
11. FiiO M3K .MP3 Player
Umzimba womshini uphonswa ku-aluminium ukusiza ukuthuthukisa ukuqina komkhiqizo, ukukhawula ukuklwebheka kanye nomthelela. Umshini wenza kahle indima yomshini odlala umculo ngamafomethi amaningi wefayela, futhi urekhoda umsindo, ufunde ama-ebook, futhi ulalele izilimi zakwamanye amazwe.
Umshini unomsebenzisi osebenziseka kalula, usebenza kahle. Lena ukuphela kwemodeli phakathi kwalokhu okungenhla enekhadi lememori langaphandle elifika ku-2TB: lihlaba umxhwele futhi liwusizo ikakhulukazi kulabo abadinga ukugcina amakhulu ezinkulungwane zezingoma.
Izinto ezihlala isikhathi eside
Umsindo ocacile, omkhulu
Ibhethri eliqine ngokwedlulele: Amahora angu-26 okusebenza okuqhubekayo
12. Aigo MP3-206
Ngokuvumelana negama elincane, isidlali somculo esincane se-Aigo MP3-206 sinosayizi ohlangene ngokwedlulele, kulula ukusigcina, ukusiphatha kalula. Ukuhlanganiswa kwamathoni amnyama namhlophe kudala ukugqama komkhiqizo. Umshini wenziwe ngepulasitiki ye-ABS, eqine ngokwedlulele futhi ihlala isikhathi eside.
Isidlali sisekela ukuxhuma kumafoni namalaptop kalula. Umthamo wememori khadi enkulu: I-64GB ihlangabezana nezidingo zokugcina umculo, amavidiyo,… Umshini futhi usekela amafomethi amaningi afanayo namamodeli angenhla.
Imibala edonsa amehlo
Usayizi ohlangene ngokwedlulele
Ngenhla abadlali bomculo abahamba phambili abayi-12 emakethe namuhla. Abafundi bangabheka futhi bazikhethele ama-headphone abanomuzwa wokuthi afaneleka kakhulu.
Xem Thêm Top 5 máy trộn bột Bosch tốt bán chạy nhất hiện nay | Muasalebang
Đo hiệu năng điện thoại, máy tính cực độc lạ với hồ cá của fishbowl | Muasalebang
Cách làm lẩu Thái chua cay ngon tuyệt cho ngày lạnh | Muasalebang